‘प्रचण्ड–नेपाललाई तह लगाउन या चुनाव गराउन संसद विघटन भएको होइन’ - Nepalese Times
‘प्रचण्ड–नेपाललाई तह लगाउन या चुनाव गराउन संसद विघटन भएको होइन’
डा. शेखर कोइराला १० माघ २०७७, शनिबार १७:४१ (1 महिना अघि) ४५० जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रचण्ड–नेपाललाई तह लगाउन या चुनाव गराउन संसद विघटन नभएको बताए छन् । कांग्रेस कन्चनपुरले शनिबार गरेको कार्यक्रममा उनले नेपाली कांग्रेसलाई सर्वोच्चले जस्तो फैसला गर्छ त्यो स्वीकार्य हुनेसमेत बताएका छन् । उनले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर गर्यो भने नेपाली कांग्रेस चुनावबाट नभाग्ने तर, वैशाखमै चुनाव हुने निश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । तर, सर्वोच्चको फैसला नआउन्जेलसम्म कांग्रेसले संसद पुनःस्र्थापनाकै माग गरिरहनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । कन्चनपुरमा उनले गरेको सम्बोधन यस्तो छ –
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसँग ६४ प्रतिशत सांसदहरु छन् भनेर भनिराख्नुभएको छ । म केपी शर्मा ओलीलाई भन्न चाहन्छु – ६४ प्रतिशत सांसद भएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै पाउँदैन । अहिलेको संविधान अनुसार उहाँको कदम असंवैधानिक छ । संविधानमा स्पष्ट छ, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन भनेर । यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरित हो भन्ने जो कोहीको मनमा लाग्नु स्वभाविक हो ।
जुनबेला म संविधानसभाको सदस्य थिएँ, मेरो मनमा पनि यो कुरा नउठेको होइन । हामी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकार पाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौँ । विघटन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भनेर हामीहरुले नै भनेका थियौँ । तर, नेकपाका साथिहरु खासगरी सुवास नेम्वाङ, अग्नी खरेललगायतले स्वीकार गर्नुभएन । अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्नुभयो । स्थिरताका लागि स्थायी सरकार चाहिन्छ भन्नुभयो । नेपालमा अस्थिरता धेरै भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिन नहुँने भनेर उहाँहरुले नै भन्नुभयो । उहाँहरुकै प्रस्तावमा हामीले स्वीकार गर्यौँ ।
संसदबाट सरकार बन्नै नसक्ने अवस्थामा मात्रै संसद विघटन हुन सक्ने कुरालाई हामीले भुल्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीजी, आफूलाई आफ्नै साथिहरु प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतले दुःख दिनुभयो भन्दै हुनुहुन्छ । संसदले चिन्दैन प्रचण्ड, माधव नेपाल र भिम रावललाई । संसदले माननीय प्रचण्डमात्रै चिन्छ । माननीय भिम रावल र माननीय माधव कुमार नेपालमात्रै चिन्छ । व्यक्तिलाई चिन्दैन संसदले । कार्यकर्ता र पार्टीलाई चिन्दैन संसदले । त्यसकारण ओलीजीले जुन कारणहरु पेश गरिरहनुभएको छ, ति सबै कुराहरु गलत छन् ।
तपाईहरुको मनमा के संसद पुनःस्र्थापना हुन्छ त ? भनेर प्रश्न उब्जिरहेको हुन सक्छ । संसद पुनःस्र्थापनामा नेपाली कांग्रेस पनि अल्मलिएको हो की ? कांग्रेसमा पनि विवाद छ, सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच फरक कुरा आईरहेको छ किन ? भन्ने प्रश्न तपाईहरुमा पनि छ र हामीमा पनि छ । यसबारे म अलि थप प्रष्ट पार्न चाहन्छु । नेपाली कांग्रेस यसबारे स्पष्ट छ । कांग्रेसले सुरुदेखि नै भन्दै आएको छ की यो कदम असंवैधानिक हो भनेर । यो कदम अलोकतान्त्रिक हो । यो कदम गैर–राजनीतिक हो । यो कदम बदनियतपूर्ण मनसायले गरिएको कदम हो । सर्वसत्तावाद ल्याउनका लागि ओलीजीले यो कदम अघि बढाउनुभएको हो भनेर कांग्रेसले विज्ञप्ती नै निकालेस सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
वरिष्ठ नेता र सभापतिबारे संचारमाध्यममा जे जे कुरा आईरहेका छन्, ती कुराहरु सहि छैन भनेर भन्दिन म । तर, असंवैधानिक भन्ने सवालमा हामी सबै नेपाली कांग्रेसका साथिहरुको एउटै श्वर रहेको छ । देशभरका साथिहरु एकठाउँमा छौँ । त्यसलाई सच्याउ भनेर भनेका छौँ । सच्याउन भन्नुको अर्थ पुनःस्र्थापना गर भनेका हौँ । परिस्थितिलाई ट्रयाकमा ल्याउन हामीहरुले अहिले सर्वोच्च अदालतलाई बल दिईरहेका छौँ । संसद असंवैधानिक छ भनिसकेपछि संसद पुनःस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । ओलीको कदम संसद पुनःस्र्थापना गरेर मात्रै सच्चिन्छ ।
नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो । सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हामीहरुले स्वीकार गर्छौँ । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको सदस्यको हैसियतले हामीले स्वीकार्नुपर्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ सालमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसबेला तत्कालिन नेकपा एमालेका साथिहरुले खुसी मनाउनुभयो । चुनावमा जानुपर्छ भन्दै उहाँहरु खुसी हुनुभयो । त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गर्नुभयो । विश्वनाथ उपाध्यायले त्यसलाई हुँदैन भन्नुभयो । त्योबेला संसद विघटन गर्ने अधिकार लेखिएको थियो । संविधानमै उल्लेख थियो । त्यतिबेला एमालेका साथिहरुले विश्वनाथ उपाध्ययलाई ‘फासी द’े भनेर भन्नुभयो । तर, हामी अहिले त्यसो भन्दैनौँ । चित्त बुझोस् या नबुझोस्, सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर हामी अघि बढ्छौँ । भोली केपी ओलीको कदमलाई सदर गर्यो भने देश निर्वाचनतिर जान्छ । त्यसअवधिसम्म हामीले विरोध गर्नुपर्छ । अहिले जसरी हामीले विरोध गरिरहेका छौँ, सर्वोच्च अदालतले निर्णय नदिनुजेलसम्म यो कदमको विरोध गर्छौँ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पनि हामीले विरोध गर्छौँ । त्यतिबेलाको विरोध अलिक फरक हुन्छ । वैशाख १७ र २७ गते चुनाव गर्ने भनिएको छ । यो समयमा चुनाव गर्ने सुनिश्चित हुनेपर्यो । हामी चुनावमा जान तयार छौँ । हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौँ निर्वाचनसँग डराउँदैनौँ । लोकतान्त्रिक पार्टी संधै निर्वाचनका लागि तयार हुन्छ र रहनुपर्छ । हामी त चुनावमा जान तयार छौँ तर चुनाव हुने सुनिश्चित हुनुपर्यो । वैशाखमा चुनाव भएन भने देश द्धन्दमा फस्छ भन्ने डर हामीहरुलाई छ । त्यो द्धन्दले देशलाई कता लैजान्छ भन्नेकुरा चाँही महत्वपूर्ण हो । त्यो दुर्घटनाबाट कसरी बच्ने र बचाउने भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हो ।
निर्वाचन सुनिश्चित गरियो भने मात्रै देश द्धन्दमा जानबाट बच्न सक्छ । त्यसकारण पनि हामीहरुले विरोधका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनैपर्छ । आन्दोलनको रुपरेखा भिन्दै हुन सक्छ, केपी ओलीको अहिलेको कदमको विरुद्धमा निरन्तर लाग्नुपर्छ । केपी ओलीले सुद्ध मनले चुनावमा जान खोजेकै होईन । चुनावका लागि संसद विघटन गरेको भनेर कसैले सोच्छ भने त्यो गलत छ । उहाँ त सर्वसत्तावाद, अधिनायवाद र तानाशाह भएर अघि बढ्न खोजिरहनुभएको छ । निर्वाचन गराउनका लागि उहाँले संसद विघटन गराउनुभएको होइन । प्रचड र माधव नेपाललाई तह लगाउनका लागि मात्रै यसो गरिएको होइन भन्ने बुझौँ पहिले । त्यो कुरा हामीले बुझ्न सक्यौँ भने अनि मात्रै हामी हाम्रो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ । निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित, स्वतन्त्र र सबै पार्टी सहभागि गराउने हुनुपर्छ । हैन भने निर्वाचन हुन सक्दैन ।
पहिलो संविधानसभा सम्झनुहुन्छ होला तपाईहरुले । घोषणा भयो, संविधानमै लेखिएको थियो कि कति गते चुनाव गर्ने भनेर । मलाई सम्झना छ की चुनाव कार्तिक २७ गते गर्ने भनेर लेखिएको थियो । प्रचण्डजीहरुले त्यतिबेला नै आफूहरुलाई स्वीकार नहुने भन्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसलाई सार्नुभयो । अन्य राजनीतिक दलहरुको सहभागिता पनि त्यतिकै जरुरी छ । प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको सहभागिता निर्वाचनमा अनिवार्य छ । त्यो जरुरी छ । यत्रो ठूलो ग्रुप छ उहाँहरुको, त्यसलाई चुनावमा भाग लिन नदिएर अगाडी बढ्यो भने देश फेरी द्धन्दमा फस्न सक्छ ।
नेपाली कांग्रेसको काँधमा जिम्मेवारीहरु थपिदै गएको छ । लोकतन्त्र बचाउने जिम्मेवारीलाई त कांग्रेसले संधै लिएकै छ । त्यो सँगसँगै अहिले भैरहेका कुराहरुलाई पनि हामीहरुले बचाउनु छ । गर्नै नपाउने कदम अघि बढाएर ओलीजीले संविधानलाई धुजा धुजा बनाउन खोज्नुभएको छ, त्यसलाई हामीले ट्रयाकमा ल्याउनु छ ।
संविधान नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको हो । शुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी भएको हो । त्यो संविधानलाई बचाउने जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेसकै हो । यसतर्फ पनि हामी नेपाली कांग्रेसका साथिहरु एकदमै गम्भीर छौँ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय नआउन्जेलसम्म हामीहरुले संसद पुनःस्थापनाकै कुरा गर्ने हो । सर्वोच्चको फैसला कस्तो आउँछ, त्यसलाई स्वीकारेर त्यतिबेलाको आवश्यकतालाई हेरेर अघि बढ्नुपर्छ ।